Ubuntu 20.04 "Focal Fossa" beta yave kuwanikwa kuyedza | Kubva kuLinux
Ubuntu 20.04 "Focal Fossa" beta yave kuwanikwa kuyedza
Vhiki yekupedzisira Ubuntu 20.04 beta yakaburitswa «Focal Fossa», izvo yakatarwa yakazara chando kubva pasuru dhatabhesi ndokuenderera mberi nekuyedza kwekupedzisira uye kugadzirisa bug. Iyo vhezheni, iyo inorondedzerwa seyakareba-refu rutsigiro vhezheni (LTS), iyo inogadziridzwa inoumbwa pamusoro pemakore mashanu uye yakarongerwa kuburitswa muna Kubvumbi 5.
Pakati pekuchinja kukuru izvo zvinoratidzwa zviri iyo desktop yakagadziridzwa kuGnome 3.36. Dingindira rekutanga reYaru rakagadziriswazve, kuwedzera kune dzaimbovapo nzira dzerima, yakajeka zvachose yechitatu vhezheni ichaonekwa.
Uyewo dhizaini nyowani inotsanangurwa yeiyo system menyu uye iyo menyu yekushandisa. Zvinyorwa zvemanyowani matsva zvakawedzerwa izvo zvakagadziridzwa kuti zviratidzwe pachiedza uye nerima kumashure.
Uyewo, Gnome Shell performance optimization zvakakosha uye hwindo maneja.
Processor mutoro wakaderedzwa uye lags yakaderedzwa panguva yekuratidzwa kwekupopota paunenge uchigadzirisa windows, uchifambisa mbeva, uye kuvhura yekutarisa maitiro.
Wakawedzera rutsigiro rwegumi-bhiti kudzika kwemavara uye Fractional chiyero rutsigiro inoitwa muX11, iyo yaimbowanikwa chete neWayland. Iyi ficha inokutendera iwe kuti usarudze rakaringana saizi yezvinhu pazviratidziro neiyo yakakura pixel density (HiDPI), semuenzaniso, iwe unogona kuwedzera izvo interface zvinhu izvo zvinoratidzwa kwete ka2, asi ka1.5 nguva.
Iyo Linux kernel yakagadziridzwa kuita vhezheni 5.4 uye iyo LZ4 algorithm inoenderera ichishandiswa kumanikidza iyo kernel uye yekutanga boot mufananidzo initramf, kudzikisa bhuti nguva nekuda kwekukurumidza kudzora kwedata.
Padivi rezvinhu zvehurongwa zvakagadziridzwa zvinotevera: Glibc 2.31, BlueZ 5.53, OpenJDK 11, rustc 1.41, GCC 9.3, Python 3.8.2, ruby ​​2.7.0, Ruby paRail 5.2.3, php 7.4, perl 5.30, Mesa 20.0, PulseAudio 14.0-pre, Firefox 74.0 , Thunderbird 68.6.0, LibreOffice 6.4, QEMU 4.2, libvirt 6.0, Bind 9.16, HAProxy 2.0, OpenSSH 8.2 (ine rutsigiro rweFIDO / U2F maviri-factor yekusimbisa tokeni) uye muApache httpd iwe wagonesa TLSv1.3 kutsigira.
Zvakare kufananidzwa neyekutanga vhezheni yeLTS, Snap Store yakatsiva Ubuntu software seye default turu yekutsvaga nekuisa yakajairwa uye yekuwedzera-mapakeji.
Iwo mapakeji eiyo i386 yekuvakisa senge mushanduro dzapfuura akasiiwa. Kuti uenderere mberi nebasa remapurogiramu echinyakare anoramba ari mu32-bit fomu chete kana anoda maraibhurari makumi matatu nematatu, kuunganidzwa uye kuendesa kweakasiyana seti ye32-bit mapakeji nemaraibhurari zvinopihwa.
Iko kuvandudzwa kwesimba rekuyedza rekuisa kumidzi yekuparadzanisa neZFS kwakaramba kuchienderera. Kuteedzerwa kwe ZFSonLinux yakagadziridzwa kuita vhezheni 0.8.3 nerutsigiro rwekunyorera, kupisa kupisa kwemidziyo, iyo "zpool trim" yekuraira, kukurumidza kweiyo "kukwesha" uye "resilver" mirairo.
Kugadzirisa ZFS, zsys daemon inogadzirwa, iyo inokutendera iwe kumhanyisa akawanda akafanana masisitimu neZFS pane imwe komputa, inogadzira snapshot yekugadzira, uye inodzora kupatsanurwa kweesystem data uye data iro rinoshandurwa panguva yemushandisi chikamu.
Mune mapikicha akasiyana, inogona kuve neakasiyana mamiriro eiyo system uye chinja pakati pavo. Semuenzaniso, kana paine matambudziko mushure mekuisa zvigadziriso, zvinokwanisika kudzokera kune yapfuura yakagadzikana mamiriro nekusarudza yapfuura snapshot. Snapshots inogona zvakare kushandiswa kwe otomatiki uye akajeka backup yemushandisi data.
Chidziro chitsva chekugamuchira chakawedzerwawo inoratidzwa panguva yebhutsu uye iyo crony nguva sync daemon inovandudzwa kune vhezheni 3.5 uye nekuwedzera kusarudzika kubva muchirongwa nekubatanidza iyo system yekufona firita.
Mifananidzo yekuyedza iyo yakagadzirwa yagadzirira kushandisa uye izvi zvakagadzirirwa Ubuntu, Ubuntu Server, Lubuntu, Kubuntu, Ubuntu Mate, Ubuntu Budgie, Ubuntu Studio, Xubuntu uye UbuntuKylin.
Kuti uwane iyo system mufananidzo inogona kuitwa kubva chinotevera chinongedzo.
Mufananidzo wacho unogona kunyorwa pane USB nerubatsiro rweEtcher.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Kugoverwa » Ubuntu 20.04 "Focal Fossa" beta yave kuwanikwa kuyedza
SEED RL, Google Open Source Sisitimu yeArtificial Intelligence Models
Mastodon: Yemahara, Yakavhurika uye Yazvino Imwe nzira kune Twitter